Entsha kwimiboniso bhanyabhanya kuphela-iKrisimesi ekunye nabakhethiweyo: abaThunywa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Entsha kwiiCinemas kuphela-iKrisimesi kunye nabaKhethiweyo: Izithunywa
Entsha kwiiCinemas kuphela-iKrisimesi kunye nabaKhethiweyo: Izithunywa
Ukuphawula into yehlabathi eKhethiweyo, iKrisimesi KUNYE ABANYULIWEYO: ABATHUNYWA, owokuqala kwi-franchise ukuba ibonwe kwimiboniso bhanyabhanya kwilizwe lonke ngeFathom Events, yathengiswa ngexesha lokuvela eDallas Jenkins ngoLwesibini ebusuku, kwaye yaphula iirekhodi zokuthengisa kwangaphambili. umsasazi.
"IKRISMASI KUNYE ABANYULIWEYO: ABATHUNYWA baphule irekhodi ye-Fathom Events 'nge-$ 1.5 yezigidi kwiintengiso kwiiyure ze-12 zokuqala," kusho uRay Nutt, i-CEO ye-Fathom Events. "Ekuqaleni ihlelelwe umboniso wokuqala kwiithiyetha ezili-1079, sele songeze iindawo ezingama-450+ kunye namawakawaka ezikrini ukwanelisa imfuno kwaye silindele ukuba la manani aqhubeke nokukhula."
Idutyulwe ngasese ngokupheleleyo, ABATHUNYWA babonisa ukuzalwa kukaKristu ngamehlo kaMariya noYosefu kwaye ibonisa abadlali abavela kuthotho olukhethiweyo.
Esi siganeko sikwabonisa imiboniso evela kumagcisa angamaKristu angaqhelekanga kunye namaqela aquka uPhil Wickham, uMaverick City Music, For King and Country, Brandon Lake kunye nezinye ezininzi.
Isiganeko senzeka kwiithiyetha bhanya-bhanya ekuqaleni kuka-Dec. IKRISMASI KUNYE NABANYULIWEYO: ABATHUNYWAYO bakhululwa ngeziganeko zeFathom.
“Xa sigqibe ekubeni senze isiqendu esikhethekileyo seKrisimesi, besisazi ukuba iya kuba lelona xesha lifanelekileyo lokufumana oku kwiscreen esikhulu,” utshilo uMdali, uMbhali kunye noMlawuli uDallas Jenkins. “Lithuba lokuqala abalandeli abaKhethiweyo ukuba baqokelelene kwilizwe liphela, ke sizimisele ukulenza libe lixabiso. Kwaye zonke iimvumi ezimangalisayo zihlangene, lo ngumsitho ogqibeleleyo wokumema abahlobo. "
Uluhlu lwabadlali beKrismesi NABAKHETHIWEYO: ABATHUNYWA ngoku baquka:
• UPhil Wickham
• KuKumkani nelizwe
• Ichibi laseBrandon
• ULeanna Crawford
• UJordan Feliz
• UMat Maher
• IKwayala yaBantwana yelizwi elinye
• The Bonner Family
• UBryan noKatie Torwalt
• Thina BuBukumkani
• Abadlali abavela kuThe Chosen badlala indima enkulu: uAustin Reed Alleman (Nathaniel) Giavani Cairo (Thaddeus) Luke Dimyan (Judas)Lara Silva (Edeni)